Fitantanam-pitondrana · Marsa, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Marsa, 2009
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Marsa, 2009
Maldiva 25 Marsa 2009
Fivavahana 12 Marsa 2009
Amerika Latina 07 Marsa 2009
Miditra fitsarana ankehitriny ny filoha Kosta Rikana teo aloha Rafael Angel Calderon fournier mahakasika ny fanenjehana azy tamin'ny fividianana fitaovam-panafody ho an'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana. Efa tany amponja izy nohon'ny enjika natao taminy mahakasika ny fifandraisany tamina fividianana fanana tsy mari-pototra. Mety hampihena ny fanantenany hilatsaka ho fidiana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena izany.
Armenia: Herintaona taty aorian’ny ady noho ny fifidianana
Armenia 05 Marsa 2009
Anarivony ireo olona tonga teny andalamben’I Yerevana tamin’ny Alahady mba hitondra fahatsiarovana ny disadisa tao aorian’ny fifidianana tamin’ny herintaona lasa teo tao Armenia izay nahafaty olom-pirenena valo sy polisy anankiroa. Satria mbola ao ambadiky ny lalana ireo mpihetsiketsika manohitra, dia noampangaina marindrano ny governemanta tamin’ny andraikitra kely dia kely noraisiny mba ahafahana manao famotorana ho araka ny tokony ho izy ny ady saritaka.